13 xaqiiqo oo ku gedaaman sariirta aad ku seexato - BBC News Somali
13 xaqiiqo oo ku gedaaman sariirta aad ku seexato
23 Luulyo 2019
Image caption Ma haysataa sariir kugu haboon?
Marka aad gurigaaga muddo ka maqnaato, marka aad soo daasho, marka aan murugsan tahay, haddii aad faraxsan tahay... ma jiro wax ka fiican in sariirta aad isku tuurto oo aad seexato.
Waa halka aan ku hurudno, buugaagta ku akhrisano, laguna sameeyo fara-ciyaarka.
Haddaba halkee sariirtu ka timi, maxayna nafteena ku qeexdaa?
Weriyaha BBC, Katy Brand ayaa baaritaan ku sameysay.
1. Furaashka wuxuu bilowday 77,000 oo sano ka hor
Image caption Godadka ma ku habooneyn in la seexdo, ka dib dadkii xilligaas waxay billaabeen joodariga
Cadeyntii ugu horeysay waxay muujineysaa in furaashkii ugu horeeyay la sameeyay 77,000 oo sano ka hor, sida uu sheegay taariikhyahan, Greg Jenner.
Dadkii South Africa ee godadka dhex seexan jiray, waxay haysteen joodariyo ay gacanta ku toleen.
"Dhagxaanta dushooda laguma seexan karin," ayuu yiri Greg oo intaa ku daray "Cayayaan wuu ka buuxay, marka waxaad u baahan kartaa in dhulka aadan ku seexan".
Haddaba, "Waa arrin macquul ah" Bini-aadamka waxay jecel yihiin "waqti nasasho" oo ay ku qaataan meel kor u qaadan oo qurxoon.
Dadkii hore waxay cashada ku cuni jireen isla halkaa, "furaashyada way wasaqoobaan muddo ka dib, waana la gubi jiray. Taariikhyahannada waxay heleen haraagii wixii la gubay," ayuu yiri Greg.
2. Sariirihii hore waxaa lagu xoojin jiray dhagxaan
Image caption Dadkii hore waxay ku dul seexan jireen dhagxaan
Catalhoyuk - oo hadda ah Turkiga - "Waa magaaladii ugu horeysay abid, marka dib loo milicsado xilligii Neotholic taas oo ah 10 kun oo sano ka hor," ayuu yiri Greg. "dadkaaas ayaa billaabay in ay sameystaan meel sare oo ay ku seexdaan".
Waxaa sidaa oo kale sameeyay dadkii ku noolaa Skara Brae ee Orkneys (oo hadda ah Scotland), taas oo la billaabay 6,000 oo sano ka hor.
Dadkii deegaanka waxay sameysteen "dhagxaan kor u dhisan oo ay ku seexan jireen. Waxay dul saari jireen furaash yar," taas oo ahayd xilligii bilowga casriga, sida uu tilmaamay Greg.
3. Sariirihii Masaarida waxay lahaayeen lugo qalloocan oo hoos laga qoray
Image caption Tujaartii Masaarida waxay sariiraha ku dareen lugo
Tujaradii Masaarida waxay lugo u yeeleen sariirahooda, waxayna ahaayeen "kuwo si quruxbadan loo qoray oo loo ekeysiiyay lugaha xoolaha, waxaana laga sameeyay alwaax," Ayuu yiri Greg.
Si ka duwan sariiraha casriga ah, Waxay ahaayeen kuwo dhuuban. Waxaa loo hagaajiyay sida ah in dhexda looga jilba jabsado ama si foorar ah in loogu seexdo si lugaha ay uga korreeyaan madaxa.
"Ujeedadu waxay ahayd in lugaha qofka aysan sababi inuu ka dhaco sariirta!"
4. Dhanka Bariga, dherirka sariirtaada kama turjumeyso heerka aad nolosha ka gaartay
Image caption Dhanka Japan, dadka weli waxay ku seexdaan sariir gaaban oo dhulka ku dhow, iyadoo aan la eegeyn guushooda bulshada dhexdeeda
Dhanka reer Galbeedka iyo Tujaarta Shiinaha, sariirtaada heerkeeda waxay ka turjumaysaa sumcadda aad bulshada ku dhex leedahay.
Balse meelaha kale: Japan, Sariiraha dhaqanka ee tatami weli waa kuwa ugu badan - waana lagu fariistaa.
Sidoo kale qeybo ka mid ah Kazakhstan, "Waxaa weli lagu seexdaa derin loo yaqaano tushuks," ayuu yiri Greg. "Taas waxaa sabab u ah in dadkaas ay dhaqan ahaan yihiin xoolo dhaqato ayna la guura teendhooyiin iyo sariirahooda, weli waxay haystaan dhaqankaas."
5. Dadkiin Romanka iyo Greek-ga, sariirta ayey ku dul cunteyn jireen
Image caption Romanka iyo Giriigga aalaaba sariirta ayey wax ku dul cuni jireen
Sariirihii Roman iyo Greek Waxyaabo badan ayaa loo adeegsan jiray: Waa lagu seexan jiray, waxna waalagu dul cuni jiray.
Dadka way "ku dul dangiigsan jireen, taas oo sababtay in Greek-ga laga dhexlo ereyga English-ka ee ah "recline" oo afka Greek ku ah "klínē" sida uu Greg sheegay.
6. Sariirihii waaweynaa ee bilowgii xilligan casriga ah waxaa ku seexan karay dhammaan qoyska iyo martida
Image caption Sariirahan waaweyn waxaa isticmaali jiray Tujartii Yurub
Yurubtii bilowga casriga, dadkii fuqarada ahaa waxay ku seexan jireen cows, balse kuwa taajiriinta ahaa waxay billaabeen inay sameystaan "sariiro waaweyn".
Waxay ahayd "sariir weyn oo alwaax qaali ah ka sameysan, tasaalaha waxaa ka mid ah sariirtii weyneyd ee boqoraddii hore Elizabethan ee UK looga garanayay Great Bed of Ware," ayuu yiri Greg.
Waxay ahaayeen "sariiro weyninkoodu xad-dhaaf ahaa, waxaana ku dul fariisan karay koox dhan oo kubadda cagta ah."
'Aabe wuxuu igu yiri waxaan u soconnaa dhakhtarka ilkaha, balse dib iiguma soo noqon'
Inkastoo ay u muuqdaan wax aad u culus, haddana "waxaa loo sameeyay si loo kala furfuro oo aad ugu qaadan karto deginkaada xiga," ayuu sheegay Greg, Sababtoo ah dadka taajiriinta waxay u kala safri jireen hareeraha dalka waxayna horey u sii qaadan jireen sariirahooda qaaliga ah.
7. "Macaanka hurdada" waxay ku xirantahay sida sariiraha loo sameeyay
Sariirihii hore waxay lugaha iyo geesaha ka ahaan jireen alwaax - balse dhexda waxaa looga sameyn jiray xargo is dhaaf loo xiray.
"Xargahaas si adag ayaa loo xiray, waxayna ahaayeen jileec," ayuu yiri Greg, "Waa in la dhuujiyo haddii aad hurdo macaan u baahan tahay".
8. Sariiraha loo sameeyo dhinacyo looga xiro maryo, waxay muujiyaan horumar
Image caption Sariiraha noocan ah waa kuwa weli loogu isticmaalka badan yahay
Qarniyadii 1400-aad iyo 1500-aad, waxaa bilowday sare u kaca sariiraha noocan ah (Sawirka kore) ee loo yeelay dhinacyo lagu xiro maryo lagu qurxiyo.
"Waxay lahaayeen wax loo ekeysiiyay saqaf - Dadkii Taliyaaniga aad ayey u jeclaayeen - waxaa lagu xiray daahyo qafiif ah, barkimo badanna waala dul saaray, waxaana meelaha qaar loo badalay mashraxyo yaryar," ayuu sheegey Greg.
Sariirahan quruxda badan waxay tusaale fiican u ahaayeen ismuujinta heerka ay noloshaadu gaarsiisan tahay.
9. Sariir loo adeegsado in ay xuddun u noqoto nolosha siyaasadeed
"Bilowgii hore ee casriga waxaa caan ahaa Sariiraha qaranka" ayey tiri Prof Sasha Handley, oo khabiir ku ah nolosha xilligii u dhexeeyay 1500 illaa 1800, iyo sidii loo hurdi jiray xilligaas.
"Laba boqortooyo oo arrintaas sameeyay waxay kala yihiin Louis XIV ee France ee magaalada Versailles iyo King Charles II ee England ee dhammaadkii qarnigii 17-aad," ayey tiri Sasha.
"Waxay sariirta u ahayd bartamaha noloshooda siyaasadeed."
10. Dadka qaar waxay suri jireen midiyo "caruurta ka celiya xumaanta"
Masiixiyiinta waxay aaminsanaan jireen in ay u nugul yihiin in "ruuxaan ay ku soo weerarto sariirta dusheeda, marka ay hurdaan - Cabsidooda ugu badan waxay ahayd ruuxaanta socota xilliga mugdiga".
Kitaabkooda waxaa ka buuxo tusaalooyiinka ruuxaan oo dad ku dishay sariirta xilli habeen ah, taasna waa sababta ay wax badan uga aaminsan yihiin "ruuxaanta xilliga hurdada".
Taas waxay qasabtay in qoorta ay ku xirtaan ilkaha yeyda - Midina ay ka dul lulaan sariirta marka ay caruurta hurdaan.
Waxay aaminsan yihiin in weerarada ruuxaanta ay ka hortageyso.
11. Sariiraha qaar waxaa lagu xiraa lix furaash oo loo arko dhaxal
Xilligii hore, qoysaska waxay waqti, dhaqaale badan iyo awood ku bixin jireen sariiraha.
Qoraagii caanka ahaa William Shakespeare wuxuu "sariirtiisii labaad ee ugu fiicnayd" dhaxal u siiyay xaaskiisa.
Tan waxay noqon kartaa dhaxal deeqsinimo leh - xilligaas sariirta waxaa loo arkay dhaxalka ugu fiican ee qof looga tago.
12. Sariiro loo soo saaray ka hortagga cuduro
Illaa qarnigii 19-aad, inta badan sariiraha dalalka Yurub iyo wadamadii ay gumeysteen, waxaa laga sameyn jiray alwaax.
Laakiin wixii ka dambeeyay 1860-maadkii, dadka waxay ka warheleen in sariiraha ay jeermis leeyihiin iyo in sariiraha alwaaxda ka sameysan ay galaan injir iyo kutaan - waxayna ku badaleen sariiro bir ka sameysan.
Waxay sariirahan ahaayeen kuwo si fudud loo nadiifin karo, wayna ku fiicnaayeen nadaafadda.
Waxaa sidoo kale la badalay furaashyadii saarnaa, waxaa la soo saaray kuwo la geliyay biro moolo ah.
13. Bilowga sariiraha caruurta
Image caption Dalkii ugu horeeyay ee sameeyay wuxuu ahaa Britain
Taariikh ahaan, qoyska oo dhan waxay lahaan jireen hal sariir oo caruurta ka yar laba sano ay waalidka kula seexan jireen.
Balse Britain, xilligii boqoraddii Victoria, waxay billaabeen in dadka aysan isla seexan, caruurtana sariir gaar ah loo sameeyo.
Waxay sheegeen in caafimaad ahaan ay haboon tahay in caruurta yaryar aysan la seexan waalidkooda; waxayna aaminsanaayeen in dadka waaweyn ay "awoodda ka dhuuqayaan caruurta", marka xilliga habeenka la seexdo.
Gabadh reer Britain ah oon caadadii waayin, calooshuna kuusan ayaa haddana curatay.